राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी किन पर्‍यो विवादमा? :: Setopati
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी किन पर्‍यो विवादमा?
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामाले गत बुधबार साँझ फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे। नयाँ वर्षको दिन लेखिएको उनको उक्त स्टाटसमा नयाँ वर्षको शुभकामना थिएन। लामाले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीको नयाँ डिजाइन गर्दा लापरबाही भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
राष्ट्रिय टिमले लगाउने जर्सीको रंग र ढाँचाबारे क्यानको बोर्ड बैठकमा छलफल नभएको तथा नेपाली टिमले सुरुवातबाटै प्रयोग गर्दै आइरेहको रंगसमेत परिवर्तन गरिएको देखिएको लामाको दाबी थियो।
लामाजस्तै नेपाली क्रिकेटप्रेमीले पनि जर्सीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाली क्रिकेट समर्थक समाजको उपाध्यक्ष रेजिना बस्नेतले पनि जर्सीको नयाँ डिजाइनमा असन्तुष्टि जनाएकी छिन्।
उनले समाजको फेसबुक ग्रुपमा लेखेकी छिन्,'नेपालभन्दा स्पोन्सरको नाम ठूलो अक्षरमा रहेछ त! डिजाइनरचाहिँ को होला? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत हुने जर्सी, जुन जर्सी लगाएर खेलाडीले देशलाई प्रिजेन्ट गर्ने गर्छन्। जे गर्दिए पनि हुने।'
अर्का समर्थक सचिन तिमल्सेनाले पनि जर्सीको विषयमा सरोकारवालाले इमान्दारिता बिर्सेको भन्दै फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले नयाँ जर्सीको डिजाइनलाई आफूले देखेको मध्येकै दयनीय भनेका छन्।
कसले गरेको हो नयाँ डिजाइन?
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीको डिजाइनको विषयमा क्यानमा औपचारिक छलफल नभएको क्यानका केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामा बताउँछन्।
'राष्ट्रिय टिमको जर्सीको डिजाइनको जस्तो गम्भीर विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनु पर्ने हो। तर गत शुक्रबार भएको बोर्ड बैठकमा यस विषयमा कुरै भएन,' लामाले भने,'यदि जर्सीको डिजाइन फाइनल नै भएको छ भने बोर्ड बैठकमा यस्तो बन्यो भनेर देखाउनु पर्ने होइन र?'
क्यान स्रोतका अनुसार जर्सीको डिजाइन क्यानका कर्मचारी र जर्सी प्रायोजनको अधिकार पाएको विज्ञापन एजेन्सीले गरेका हुन्। यस विषयमा क्यानले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
कसले सार्वजनिक गरेको हो जर्सी?
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीको प्रायोजनको अधिकार विज्ञापन एजेन्सी एडप्याडले पाएको थियो। स्रोतका अनुसार क्यानले एडप्याडलाई १५ महिनाका लागि ५६ लाख रुपैयाँमा प्रायोजन अधिकार दिएको थियो।
तर क्यान र एडप्याड दुबैले आपसी सहमतिमा प्रायोजन रकम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रायोजन आधिकार पाएको एडप्याडले गत चैत ३० मा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेर राष्ट्रिय टिमको नयाँ डिजाइनको जर्सी सार्वजनिक गरेको थियो। एडप्याडले राष्ट्रिय टिमको जर्सीको प्रायोजकको रूपमा इनोभेटिभ टेक्नोलोजीको 'माइ सेकेन्ड टिचर' लाई भित्र्याएको थियो।
केन्द्रीय सदस्य लामा राष्ट्रिय टिमको जर्सी सार्वजनिक कुनै विज्ञापन एजेन्सीले गर्नु क्रिकेटका लागि शोभनीय नभएको बताउँछन्।
'सुरूमा क्यानलै नै कार्यक्रम आयोजना गरेर राष्ट्रिय टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको भए राम्रो देखिन्थ्यो। तर यहाँ विज्ञापन एजेन्सीले नै राष्ट्रिय टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको छ,' उनको भनाइ छ।
नयाँ डिजाइनमा त्रुटि
क्रिकेट टिमको नयाँ डिजाइनमा त्रुटि देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) को 'क्लोदिङ एन्ड इक्युपमेन्ट रेगुलेसन' मा जर्सीको पछाडिपट्टि लेखिने खेलाडीको जर्सी नम्बरको तल राष्ट्रिय लोगो हुनु पर्ने उल्लेख छ। तर नयाँ जर्सीमा जर्सी नम्बरको तल राष्ट्रिय लोगो छैन।
यस्तै प्रायोजकको भन्दा देशको नाम बोल्ड हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ जर्सीमा त्यस्तो छैन। त्यस्तै जर्सीको रंगमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ।
राष्ट्रिय टिमको जर्सीको डिजाइनमा त्रुटि भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले स्वीकारे।
'एडप्याडले तीन दिनअघिमात्रै प्रायोजकको टुंगो लगायो, जर्सी भारतबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले दौडधुप भयो,' उनले भने,'यो प्राविधिक कुरा हो। त्रुटि भएको भए आगामी दिनमा सच्याउँछौं।’
यसअघि नेपाली राष्ट्रिय टिमले लगाउने जर्सी। जहाँ जर्सी नम्बरको तल राष्ट्रिय झण्डा छ।
रेजिना बस्नेतले क्रिकेट समर्थक समाजमा लेखेको पोस्ट। जहाँ जर्सीको पछिल्लो भागमा जर्सी नम्बरको तल राष्ट्रिय झण्डा छैन।
आइसिसीको 'क्लोदिङ एन्ड इक्युपमेन्ट रेगुलेशसन' अनुसारको जर्सी :-
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८, १२:१५:००